Imibuzo evame ukubuzwa - Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.
Ifektri yethu ithola indawo eseShanghai, cishe amakhilomitha angama-50 ukusuka eSikhumulweni Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseShanghai. Le ndawo ihlanganisa umsebenzi omuhle kakhulu womshini nobuchwepheshe obuthuthukiswe kakhulu bemishini yokukhanyisa elula eChina, engasekela ikhwalithi yethu ye-machie.
Iyiphi inkampani oyinikeze imishini yakho?
Sinikeze imishini yethu kumabhizinisi amaningi ahlonishwayo emhlabeni wonke, afana nobisi lweFonterra, i-P & G, i-Unilever, iWilmar nokunye, futhi sanconywa kakhulu ngamakhasimende ethu.
Ungakwazi yini ukuphakela insizakalo yangemva kokuthengisa?
Yebo, sineqembu lobuchwepheshe elisebenza kahle elinganikeza ngezinsizakalo zokubonisana ngabatshali bezimali, ukuhlolwa kokusebenza kwemishini, ukuthuma, ukunikezela ngezingxenye zokungasebenzi kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe okukude ngesikhathi sobhadane.
Unasiphi isiqinisekiso sekhwalithi onaso?
Yonke imishini yethu ivunyelwe isitifiketi se-CE, futhi ingahlangabezana nezimfuneko ze-GMP. Yonke imishini izohlolwa ngokuphelele ngaphambi kokuthunyelwa. Sinikezela ngesiqinisekiso sekhwalithi yonyaka kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe impilo yonke.
Singamukela ukukhokhwa kwe-T / T noma i-L / C lapho sibona.